Arsenal iyo Chelsea oo kula biiray Man United doonista Perisic
Wednesday, April 25th, 2018 - 13:23:56
Thursday April 20, 2017 - 13:50:23 in Wararka by Muuse Cabdi
Chelsea iyo Arsenal ayaa kula biiray Manchester United xiiseynta laacibka Ivan Perisic marka loo fiiriyo suuqa kala iibsiga ee soo socda.
Perisic ayaa la filayaa in Premier League kooxaha ka dhisan uu middood ku biiro waxaana uu jecelyahay in uu mar tago England.
Arsenal ayaa waxay wajaheysaa dhibaato suuragal ka dhigeysa in uu ka tago Alexis Sanchez waxaana laacibkaas uu aadi karaa middood Manchester City, Chelsea iyo Paris Saint-Germain kooxda Arsenal ayaa waxay marka ku qasbanaatay in ay suuqa gasho.
Chelsea ayaa indhaha la raaceysa laacibka Perisic iyo bandhiggiisa, halka Inter ay ugu yaraan laacibkeeda ku bixin karto €35 ilaa 40 milyan.
Jose Mourinho waxaa uu taageere weyn u hayaa Croatia wiilka u dhashay United ayaana qeyb ka ah kooxaha doonaya in xagaaga dambe ay ciyaaraan Champions League haddiise kooxdu ku hungowdo arrinkaas, weeraryahankan ayaa diidi doona Old Trafford.
Perisic waxaa uu la dhacsanyahay usoo dhaqaaqistiisii Inter waxaase xagaagu ku xumaaday horyaalka Serie A, oo hadda ay 14 ka hooseeyaan booska loogu soo baxo Champions League xilli 6 kulan ay harsantahay.